AKW REKWỌ AKW AndroidKWỌ EGO Android 8 dvd China Manufacturer
Home > Ngwaahịa > Buick Android Car Dvd > AKW REKWỌ AKW AndroidKWỌ EGO Android 8 dvd
1. Nkwado nkwanye ụkwụ wiil dị njikere, ijiri egwu gị n'enweghị nsogbu. Site na ọrụ ndị a, ị nwere ike ilekwasị anya nke ọma n'ihu, nke ga - eme ka ịkwọ ụgbọala dị nchebe, ụgbọ oloko GIDI Android 8 dvds. , na-akwado Bluetooth-nyeere, GPS wuru na, CD Player, MP3.
2.Buiti-in GPS usoro sistemụ, na-akwado TOMTOM, IGO8, ROUTE66, NAVITEL etc.Our BUICK REGAL gam akporo 8 ụgbọ ala dvd debere ụzọ redio 30 setịpụrụ. Wuru n'ime igwe AM / FM. AKW carKWỌ BANY AndroidR Android Android 8 dvd na-eji modul redio kachasị mma iji hụ na ndị ahịa niile nwere ahụmịhe kachasị mma.
3.ỌRIC AGBARA EGO Android 8 dvd na-abịa nke a na-arụ na nha nha-eze na arụ ọrụ akwụkwọ ozi. Nwere ike megharịa akwụkwọ ekwentị gị na ekwentị gị na stereo ụgbọ ala wee mezie aka gị n'efu. Ọzọkwa i nwere ike ịnụ ụtọ egwu ọkpụkpọ ikuku site na ụgbọ ala ụgbọ ala gị na-ere ụgbọ ala BAICK REGAL Android 8 dvd.
4. Kwado atụmatụ njikọta dị mfe: Nissan BUICK REGAL Android 8 dvd dakọtara dakọtara na sọftụwia na ngwaọrụ nke android, njirimara dị mfe na-enyere aka nwekọ mmekọrịta n'etiti ama na isi ụgbọ ala gị. Nwere ike ijikọ ma mekọrịta smartphone gị na uni site na USB, na-enweghị sọftụwia ọzọ a chọrọ.
sistemụ egwu ụgbọ ala stereo multic maka Civic 2012 Kpọtụrụ ugbu a
sistemụ igwe ihe eji egwu stereo media maka CIVIC Kpọtụrụ ugbu a
Gre stereo gps maka CIVIC 2006-2011 Kpọtụrụ ugbu a
sistemụ igwe eji egwu ọdịyo maka CRV 2012 Kpọtụrụ ugbu a